ungayithola kanjani ikhibhodi efana ne-iphone ku-android
none Izindaba Nokubuyekezwa Ungayithola kanjani ikhibhodi efana ne-iPhone ku-Android
Uyacelwa uqaphele: lesi isifundo sabasebenzisi abangenalwazi (abaqalayo).
Ngaphandle kwekhibhodi ejwayelekile i-smartphone yakho ye-Android eza nayo, kunokuningi okunye kuhle amakhibhodi wesithathu iyatholakala ku-Google Play. Kepha kuthiwani uma ufuna ikhibhodi ye-iPhone kudivayisi yakho ye-Android (mhlawumbe ngoba & rsquo; ususha ku-Android, futhi wena usetshenziselwe ukuthayipha kuphela kukhibhodi ye-iOS)? Yebo, ungathola ikhibhodi yomuntu wesithathu efanisa isipiliyoni se-iOS.
Indawo yokuqala yokusesha ikhibhodi enjenge-iPhone ye-Android, kunjalo, yi-Google Play Isitolo. Mane useshele i- & ldquo; ikhibhodi ye-iPhone ne-rdquo; kuzoveza imiphumela embalwa efanelekile. Kokufundisa kwethu, sisebenzise i-iPhone Keyboard Emulator (Mahhala) eyenziwe yi-Sixgreen Labs Inc.
Lapho usukhethile, walanda futhi wafaka ikhibhodi efana ne-iPhone, finyelela kudivayisi yakho ye-Android nemenyu yezilungiselelo ze-rsquo; bese uya kuLimi nokufaka. Lapha kulapho kufanele ukwazi ukubona ikhibhodi entsha efakwe kuhlu eceleni kwekhibhodi ezenzakalelayo ye-Google. Udinga ukuyivumela ngokuthikha ibhokisi elingakwesobunxele, bese udinga ukuyenza ikhibhodi yakho ezenzakalelayo nedivayisi (izinyathelo zikhonjiswa kumbukiso wesilayidi ngezansi). Ngemuva kwalokho, usuqedile: manje usunedivayisi ye-Android esebenzisa ikhibhodi efana ne-iOS. Akunakushiwo ukuthi, ikhibhodi entsha izovela yonke indawo lapho ufuna ukuthayipha okuthile - ukuthumela imiyalezo, isiphequluli, i-imeyili njll. Lokho, ngaphandle kokuthi ushintshe ikhibhodi ezenzakalelayo ibuyele ku-Google & apos; s (noma uthathe isinqumo sokuzama enye ikhibhodi yomuntu wesithathu).
Ungayifaka kanjani ikhibhodi efana ne-iOS ku-Android
inkomba: Play music
Ama-smartphones ayi-10 amahle kakhulu e-QWERTY kusukela lapho amakhibhodi we-hardware ayepholile
IHuawei Watch 2 vs Samsung Gear S3 Frontier
UVerizon & apos; s 'Uyangizwa manje?' u-pitman manje usene-Sprint
Ungayicisha kanjani, uyiqale kabusha noma uyisethe kabusha i-Samsung Galaxy S21
Ungayiqala kanjani i-Android 4.1+ ku-Safe Mode
Ama-earbuds amahle kakhulu angenantambo anokukhanselwa komsindo okusebenzayo
Amacala amahle kakhulu we-kickstand we-Samsung Galaxy Note 8
Ukuqhathaniswa kwekhamera kwe-Galaxy Note 8 vs iPhone 7 Plus: yikuphi okuthatha ama-portraits angcono?
Amakhasimende akwa-T-Mobile maduze azothola ukufinyelela kwamahhala kolunye futhi uhlelo lokusakaza